१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०१:०६
खुसी एक भावनात्मक अवस्था हो । तर, यसबाट मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध रहन्छ । खुसीको स्थितिमा रहनु भनेको चिन्ता, तनाव, डिप्रेसनको भयबाट मुक्त हुनु मात्र होइन, मुटु लगायतका अंगहरुलाई स्वस्थ राख्नु पनि हो । त्यसो भए खुसी कसरी प्राप्त हुन्छ त ?
खुसी वा दुःखी हुनुमा हाम्रा भौतिक कुराहरु, परिस्थितीहरु पनि जिम्मेवार रहन्छ । कतिपय कुराहरुलाई चाहि हामीले आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्न सक्छौं र खुसी एवं आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौं । स–साना यस्ता कुरा, जसले हामीलाई खुसी मिल्छ ।
एक दिनको अवधीलाई विभाजन गरेर हेर्नुहोस्, तपाईं दिनभरमा कति खुसी हुनुभयो ? कति दुःखी हुनुभयो ? कति उत्साहित हुनुभयो ? कति निरास हुनुभयो ? कति उन्मुक्त हुनुभयो, कति चिन्तित हुनुभयो ?
हिसाब किताब गर्दा हामीले विताएका धेरैजसो क्षण दुःख, चिन्ता, ग्लानी, निरासा, उदासीमा वितेको हुनसक्छ । हामी लामो अवधी खुसीको स्थितिमा सायदै रहन सक्यौं । जबकी खुसी हामीभित्रै थियो । तर, जगाउन सकेनौं[ … ]
हामीसँग अनेक इच्छा, चाहना, रुची हुन्छन् । त्यसमध्ये कतिपय रुची, जसलाई सहजै पुरा गर्न सकिन्छ । त्यही रुची पुरा गर्नका लागि सार्थक योजना बनाउन सकिन्छ । यसले हामीलाई सधै उत्साहित र जागरुक राख्छ ।
हामीलाई लाग्छ प्राप्तिमा मात्र सुख छ । त्यसैले त हामी हरेक कुरा प्राप्त गर्ने इच्छा राख्छौं । एउटा कुरा प्राप्त गरेपछि हामी सन्तुष्ट हुँदैनौं । फेरी अर्को कुरा पाउने इच्छा राख्छौं । यसरी हाम्रो मन कहिल्यै भरिदैन । जबकी अरुलाई केही दिएर, केही सहयोग गरेर खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कोही अभावमा छन् भने उनका लागि आवश्यक कुरा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ । कोही अप्ठ्यारोमा छन् भने उनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट हामीलाई सन्तुष्ट मिल्छ ।
हामीले गर्ने कामबाट अक्सर दुई किसिमको नतिजा प्राप्त हुन्छ, राम्रो र नराम्रो । हामीले कस्तो काम गरेका छौं, कसरी गरेका छौं, कुन समयमा गरेका छौं, सोही अनुसार त्यसको नतिजा पनि निर्धारण हुन्छ ।
जब राम्रो काम गरिन्छ, त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ । यस किसिमको नतिजाले हामीलाई उमंगित बनाउँछ । भलै सानो काम होस्, तर त्यो सार्थक र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ ।
हाम्रा मनमा अनेकथरी कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । असल–खराब, सकारात्मक–नकारात्मक । हामी जस्तो परिस्थितीमा हुन्छौं, त्यही अनुरुप पनि हामीमा अनेक किसिममा विचारहरु निर्माण हुने गर्छ । यी सबै कुरालाई एकातिर राखेर केही राम्रो कुराको चिन्तन गर्ने अभ्यास गरौं । यसबाट मन आनन्दित हुन्छ ।
यसबाहेक अन्य स–सना कुराले पनि हामीलाई खुसी दिलाउँछ । जस्तो कि, कुनै घतलागदो पुस्तक पढौं, राम्रो सिनेमा हेरौं, बगैंचामा फूलहरुसँग खेलौं, मीठो परिकार बनाएर खाउँ, बालबच्चासँग खेलौं, साथीभाईसँग मीठा मीठा कुरा गरौं । यस्ता कुराले पनि हामीलाई दुःख, निरासा आदिबाट मुक्त गर्छ ।